Bopet, Pet Firimu, Kudhinda Base Firimu - Shuyang Genzon Novel Equipment Co, Ltd.
Nguva dzose ine yakanaka yebasa pfungwa, yakanakisa chigadzirwa mhando, inofunga mushure-yekutengesa basa, simudza yakanaka yemusika mukurumbira mumafirimu indasitiri.
Dzvanya bhuku remanyorero
Yepakati peR & D boka, inotungamirwa nachiremba anga adzidza muAmerica, inomira muSilicon Valley kutora nyika inotungamira tekinoroji Yepamusoro-yezvekurima firimu yekurima bvunzo inobatsira kwedu kwakarongeka hunyanzvi mukugadzira, kudzidza nekutsvagisa Inoshatisa polyester synthesis tekinoroji, yepasirose yekutanga yakazvimirira yeuchenjeri hwepfuma nehunyanzvi hwemhando
Goridhe waya zvigadzirwa
magetsi ekufukidza zvinhu zvigadzirwa
kuchengetedza kwemagetsi magetsi
Tarisa pane GENZON Novel Equipment, zvijairire iwe nemaindasitiri maitiro, uye ramba uchifarira genZON Novel Equipment yakakomberedza.
Kubva Genzon Novel Equipment yapedza kubatanidza uye kurongazve zvinhu uye kuziva kutanga kwakanaka kwetambo yekugadzira, mune rumwe ruoko ...
Kufananidza kwemaitiro ekugadzira ...
Parizvino, kune maviri akasiyana maitiro ekugadzira nzira muBOPET indasitiri, imwe iri kuita slicing process, imwe iri directly-melting. Isati yasvika 2013, musika uyu wainyanya kukoshesa maitiro,
Mamiriro Ezvazvino uye Tarisiro o ...
PX ndiyo inotungamira mbishi pazvinhu zvese zvayenzi indasitiri, Iko kushandurwa kwemaindasitiri kune kukosha kwakanyanya kune iyo chaiyo yakatarwa indasitiri. kupinda zvinyowani kuvandudza kwe ...
Genzon Novel Equipment, enda ...
Musi wa 28 Gunyana, chiitiko chemunharaunda che1999 Suqian Green Viwanda Expo chakaitirwa kuvhurwa kukuru muSuqian Exhibition Center. Dingindira reiyi Green Fair rinoti "green, kubatanidza uye kusvetuka ...